Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyay muwaadiniinta ku naf waa... | Universal Somali TV
Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyay muwaadiniinta ku naf waayey weerarka Kismaayo
"Innaa Lillaahi wa innaa Ilayhi raajicuun. Weerarkan argagixisanimo ee ka dhacay magaalada Kismaayo waxa uu muujinayaa yoolka cadawga dadka Soomaaliyeed oo salka ku haya in ay meel kasta ku gumaadaan haldoorkeenna iyo guud ahaan dadkeenna." Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweyne Farmaajo ayaa faray hay’adaha ammaanka heer Federaal ee ku sugan Jubbaland iyo kuwa heer dowlad Goboleed in ay sare u qaadan feejignaantooda oo ay sugaan amniga, kana hor tagaan falalka bahalnimada ah ee argagixisadu ay ku doonayaan in ay ku wax-yeelleeyaan amniga Jubbaland.
Farmaajo ayaa ugu baaqay bulshada Jubbaland in ay xoojiyaan midnimadooda iyo wadajirkooda, siina joogteeyaan la shaqeynta laamaha ammaanka, si loo xaqiijiyo amniga guud ee deegaannada oo ay ku soo food leedahay doorashada Madaxtinimo ee Jubbaland.
Kan-xigaGudoomiyihii hore ee Gobolka Hiiraan ...
Kan-horeWariye Gacmadheere oo ka mid noqday d...
Midowga Yurub oo rajo ka muujiyay shirka dib u heshiisiinta Liibiya ee ka socda Jarmalka
50,445,138 unique visits